Accueil > Gazetin'ny nosy > Firaisamonim-pirenena : “Hoentina aiza ity ady amin’ny kolikoly ity?”
Namoaka fanambarana ny Vondron’ny firaisamonim-pirenena misehatra amin’ny ady amin’ny kolikoly omaly alatsinainy. Notsiahivin’ny fanambarana ny tenin’ny filohampirenena, ny amin’ny hoe “Tsy misy indrafo”.
Izahay, Firaisamonimpirenena misehatra amin’ny ady amin’ny kolikoly, hoy ny fanambarana dia miandrandra ny fahombiazan’izany, ho tombontsoan’ny olom-pirenena rehetra. Nanao tombana an’io dingana ankehitriny hamongorana ny kolikoly io anefa ny firaisamonim-pirenena ka mahatsapa fa eo aloha ny mbola fiandrasana foana ny fandaniana amin’ny alalan’ny didy hitsivolana ilay lalàna momba ny fanagiazana sy famerenana ny fananana azo tamin’ny tsy ara-dalàna.
Raha hotsiahivina ny mahazava-dehibe ity lalàna ity, hoy ny fanambarana, tany ampiandohan’ny volana may 2019, dia nanoratra taratasy misokatra ho an’ny Filohan’ny Repoblika ny Firaisamonimpirenena. Ka nanamarika fa “tsy azo ihodivirana ny fananana lalàna mifanaraka amin’ny fenitra iraisam-pirenena, momba ny fanagiazana ny harena azo amin’ny tsy ara-dalàna.”
Notsindrian’ny Firaisamonim-pirenena koa anefa ny fahitana fa nahen’ny fitondram-panjakana ankehitriny ny teti-bola iasan’ny “Pôle anti-corruption” (Pac)
Tamin’ny alalan’ny tetibolam-panjakana 2019 nasiam-panitsiana, dia hitanay fa nihena hatramin’ny 44% ny tetibolan’ny “PAC” ka lasa 3,9 lavitrisa Ariary izany raha tokony ho 7 lavitrisa, hoy ny fanambarana, ka manahy ny amin’io fihenana io izahay, satria na ny tetibola natokana ho an’ny “Direction de la Coordination Nationale PAC” tao amin’ny tetibolam-panjakana 2019 tany am-piandohana aza dia efa kely raha oharina amin’ny filàn’io andrim-panjakana io.
Notsipihan’ny Firaisamonim-pirenena hatrany koa fa “ao anatin’ny Paikadim-Pirenena Iadiana amin’ny Kolikoly, dia voalaza fa “tokony omena ny enti-manana ampy ireo rafitra miady amin’ny kolikoly rehetra, ary izany dia singa ahitana ny tena finiavana ara-politika marina hiadiana amin’ny kolikoly (tanjona manokana n°3). Kanefa mifanohitra amin’izany ankehitriny no miseho.”
Raha mampitaha ny teti-bola natokana ho an’ny rafitra hafa anefa ny Firaisamonim-pirenena dia mahita ny fitanilana, ary zary mampihombo ny ahiahin-dry zareo izany. Ny fanazavan’izy ireo dia milaza fa “Ny tsy fifandanjan’ny tetibola natokana ho an’ny andrim-panjakana misy : HCJ (Haute Cour de Justice) ampitahaina amin’ny fitsarana manokana momba ny andramena sy/ nany « bois d’ébène », Etsy andaniny, ny tambikaraman’ireo mpikambana ao amin’ny HCJ dia mitentina 2,74 miliara Ariary, izany hoe tsy nokitihana raha oharina ny tao amin’ny tetibolam-panjakana 2019 teny am-piandohana.
Tsapanay, hoy ny firaisamonimpirenena fa mihoa-pampana loatra izany tambikarama 20 tapitrisa Ariary isam-bolana ary isan’olona izany (i) raha izao fahantrana misy eto Madagasikara izao, (i) mihoatra amin’ny habetsahan’ny asa iandraiketan’ny HCJ amin’izao fotoana izao izay tokony ho fantatry ny olompirenena, ary anisany ny raharaha dinihina eo anivon’ity andrim-panjakana ity (iii) raha oharina amin’ny tena asa ataon’ireo andrim-panjakana misahana ny ady amin’ny kolikoly izay tena andrandrain’ny olompirenena tokoa manoloana ny kolikoly misy eto Madagasikara.
Etsy ankilany kosa, ny Fitsarana misahana manokana ny andramena sy/na “bois d’ébène” dia tsy manana afa-tsy 106 tapitrisa Ariary raha ny lalàn’ny teti-bola 2019 nasiam-panovana no jerena. Nahitana fihenana ihany koa ny tetibola natokana ho an’ity fitsarana ity raha 116 tapitrisa no vinavina, hoy ry zareo firaisamonim-pirenena ihany.
Etsy ankilan’izany rehetra izany koa, ny rafitra mpanara-maso ny Volam-panjakana, izay rafitra fotsiny ihany, hoy hatrany ny fanambarana, dia inona no anjarany voarakitry ny Lalàn’ny tetibolam-panjakana mba hahombiazan’ny ady amin’ny kolikoly ?
Manan-danja ihany koa ny fahafahan’ireo rafitra mpanara-maso manao ny asany manoloana ny ady amin’ny kolikoly sy ireo fanodinkodinana volam-panjakana. Amin’ny ankapobeny dia nahitana fihenana 16% ny tetibolan’izy ireo, izay mihatra indrindra ho an’ny Sampana Mpanao ny fanaraha-maso Anatiny (-92,2%) ary ny Vaomieran’ny tsenam-baro-panjakana (-75,8%). Anisan’izany ny Fitsarana momba ny Kaonty sy ny CCFVP izay miandraikitra ny fanarahan-dalàna ary ny fangaraharan’ny kaontin’ny fampielezan-kevitra. Tsikaritra fa ambany be foana ny teti-bola natokana ho an’reo rafitra ireo sy ny hafa tsy voatanisa eto, ary mbola hita izany ato amin’ny
teti-bola 2019 nasiam-panovana, hoy ny fanamarihan’ny firaisamonim-pirenena ihany.
Mbola tsy tratra aoriana izao handraisana andraikitra ary hampisehoana tokoa ilay tena finiavana hamerenana indray ny fitokisan’ny olompirenena amin’ireo andrim-panjakana
rehetra ireo, hoy ny Firaisamonimpirenena ka mihevitra izy ireo fa mba hisy fepetra horaisina haingana ihany mba hampahomby ny ady amin’ny kolikoly.